၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်ဆု
240p | 24.9MB
1080p | 158.6MB
တရားမမျှတမှု၊ ကျား-မ အခြေခံ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တိုက်ဖျက်ပြီး ပိုမို ပွင့်လင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့ဘောင်အသိုင်းအဝိုင်း ပေါ်ပေါက်လာရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝန်းက အမျိုးသမီး ၁၂ ဦးကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဒီနှစ်အတွက် အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်တွေအဖြစ် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ တရား မမျှတမှု၊ ကျား-မ အခြေခံ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တိုက်ဖျက်ပြီး ပိုမို ပွင့်လင်း ငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့ လူ့ဘောင် အသိုင်းအဝိုင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရေး ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ မြန်မာ အပါအဝင် ကမ္ဘာတဝန်းက အမျိုးသမီး ၁၂ ဦးကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဒီနှစ်အတွက် အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်တွေအဖြစ် ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ လူငယ်အမျိုးသမီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့၊ ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG ဒုဝန်ကြီး မအိသဉ္ဇာမောင် ချီးမြှင့်ခံရတာပါ။ ဒီနှစ်အတွက် အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်ဆု ဂုဏ်ပြုပွဲအကြောင်းကို ဒီသီတင်းပတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍမှာ မခင်ဖြူထွေးက စုစည်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မတ်လ ၈ ရက် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ ကျရောက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ကမ္ဘာတဝန်း တရားမျှတရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးတွေ အတွက် ရှေ့တန်းကနေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်တွေအဖြစ် ဂုဏ်ပြုလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ကတော့ ၁၆ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ် ဆုချီးမြှင့်တဲ့ အခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၄ ရက်၊ ဒီသီတင်းပတ် တနင်္လာနေ့က ဝါရှင်တန်ဒီစီ မြို့တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken ၊ သမ္မတ ကတော် Jill Biden တို့နဲ့အတူ အထင်ကရ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တချို့ လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ကြပါတယ်။ လက်ရှိ အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သတင်းထောက် ဆုရှင်တဦး ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ဆုရှင် အားလုံး ကတော့ အွန်လိုင်းကတဆင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအခမ်းအနားဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရဲစွမ်းပြောင်မြောက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်တာ ဖြစ်သလို၊ တချိန်တည်းမှာလည်း ကမ္ဘာတဝန်းက အမျိုးသမီးတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေတွေကို သတိပေးရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိမှာ ရုရှားရဲ့ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကြုံနေရတဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတွေကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken က အလေးထား ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
“ယူကရိန်း အမျိုးသမီးတွေ သန်းနဲ့ချီ မိသားစုလိုက် တိုင်းပြည်ကနေ ထွက်ပြေး နေကြရသလို၊ ရုရှားရဲ့ တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကို ခုခံ တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေလည်း ပြည်တွင်းမှာ နောက်ထပ် သန်းနဲ့ချီ ရှိနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်လောက်ကပဲ ဒီလိုလူတွေ အများအပြားကို ပိုလန်နိုင်ငံ နယ်စပ်မှာ ကျနော် တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရုရှားရဲ့ ရန်လို တိုက်ခိုက်မှုတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ထွက်ပြေးနေရတဲ့ ပုံရိပ်တွေက အလွယ်တကူ မေ့ပျောက်ပစ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။”
အလားတူ သမ္မတ ကတော် Jill Biden ကလည်း ယူကရိန်း အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သလို၊ ပဋိပက္ခတွေ၊ ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကြား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရုန်းကန် ရှေ့ဆက်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကမ္ဘာကြီး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက် နေ့စဉ် နေ့တိုင်း အမျိုးသမီးတွေဟာ သင်ကြား ပြသ၊ ထိန်းကြောင်း မြေတောင် မြှောက်ပေး တာတွေနဲ့အတူ အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင်၊ ဦးဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဟာ မတရားမှုကို နုတ်ဆိတ် မနေကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ အမုန်းတရားတွေ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ ဖယ်ကြဉ်ခံရမှုတွေက အမျိုးသမီးတွေကို နုတ်ဆိတ်အောင် လုပ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။”
ဒီလို နုတ်ဆိတ်အောင် လုပ်တာတွေရှိပေမဲ့လို့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အကြောက်တရားတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး ပိုမို ငြိမ်းချမ်းပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ လူဘောင် အသိုင်းအဝိုင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာရေး ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken က ဒီဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ပြောပါတယ်။
“ဒီနှစ် အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်ဆု ရှင်တွေကတော့ ကမ္ဘာကြီး ပိုမို ငြိမ်းချမ်းလာဖို့၊ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး ၄ ခုမှာ တရားမျှတမှု ရှိရေး ကြိုးပမ်းနေသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အစီအစဉ်တကျ ကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကနေ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ ကာကွယ်ရေး အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်တွေ၊ လိင်စိတ်ကွဲပြားကြတဲ့ LGBTQI တွေ နဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်း ဖယ်ကြဉ်ခံရသူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် ရှေ့ဆောင် ကြိုးပမ်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီနှစ် နိုင်ငံတကာ ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်ဆု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီး ၁၂ ဦးမှာ ၅ ဦးက မြန်မာအပါအဝင် အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေက ဖြစ်ပြီး၊ အာဖရိကတိုက် နိုင်ငံတွေက ၃ ဦး၊ တောင်အမေရိကားက ၂ ဦးနဲ့ ဥရောပတိုက်က ၂ ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ရှေ့နေ Rizwana Hasan ၊ အီရတ်နိုင်ငံမှာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေ ဦးဆောင် တိုက်ဖျက်ရာမှာ ထင်ရှားတဲ့ လက်ရှိ ဒုတိယ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Taif Sami Mohammed ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ဖမ်းဆီး ထောင်ချခံထားရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ သတင်းထောက် Phạm Đoan Trang ၊ နီပေါနိုင်ငံက လိင်စိတ်ခံယူမှု ကွဲပြားသူ လူနည်းစုတွေရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လူမှု တရားမျှတမှုတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ Bhumika Shrestha ၊ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာ ကျားမ ကွဲပြားမှုကြောင့် အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခံရမှုတွေနဲ့ အစီအစဉ်တကျ ကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို တိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းနေသူ Roegchanda Pascoe ၊ လိုင်ဘေးရီးယား နိုင်ငံက အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Facia Boyenoh Harris ၊ လစ်ဗျားနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Najla Mangoush ၊ မိုဒိုဗာနိုင်ငံမှာ လွှတ်တော်တွင်း အမျိုးသမီးတွေ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုခွင့်ရရေး ဦးဆောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ လွှတ်တော်အမတ် Doina Gherman ၊ ရိုမေးနီးယား အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ Carmen Gheorghe ၊ ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ အပါအဝင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ကိစ္စရပ်တွေ ကိုင်တွယ်ရာမှာ ထင်ရှားတဲ့ ရှေ့နေ Simone Sibilio do Nascimento ၊ ကိုလံဘီယာ နိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Josefina Klinger Zúñiga တို့နဲ့ အတူ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ လူငယ် အမျိုးသမီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တဦးဖြစ်တဲ့ လက်ရှိမှာ ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG ရဲ့ အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နဲ့ ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဒုဝန်ကြီး မအိသဉ္ဇာမောင် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
“အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီကနေ့ အခြေအနေအထိ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရပိုင်ခွင့်တွေအတွက် တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျမ ရခဲ့တဲ့ဆုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လူငယ်တွေအပေါ် စစ်တပ်က ကျူးလွန်တဲ့ အကြမ်းဖက် ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို အဆုံးသတ်စေဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ရရှိရေး ကြိုးစားရုန်းကန်မှုတွေ အတွက် အသိအမှတ် ပြုပေးတဲ့ဆုလို့ ကျမ အနေနဲ့ ခံယူပါတယ်။”
ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူနည်စုတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အတွက် ရှေ့တန်းက တိုက်ပွဲဝင်သူတဦး အဖြစ် ထင်ရှားတဲ့ မအိသဉ္ဇာမောင်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လူငယ် အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ကျောင်းသားသပိတ် လမ်းလျှောက် ချီတက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချ ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ် အာဏာသိမ်းမှု နောက်ပိုင်းမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆို ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာစစ်ကောင်စီက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ခံထားရသူ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရပေမဲ့လို့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အတွက် မဆုတ်မနစ် ရှေ့ဆက် တိုက်ပွဲဝင်နေတာကြောင့် ခုလို နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်ဆု ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင်တာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆုရှင် ၁၂ ဦးရဲ့ကိုယ်စား လစ်ဗျား နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Najla Mangoush က မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေ ဘယ်လိုရှိရှိ၊ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်ရဲတာဟာ ရဲရင့်မှု သတ္တိခွန်အားပါလို့ သူက ပြောသွားပါတယ်။
“ကိုယ်လက်ခံ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ ခက်ခဲလွန်းတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဒါကို ရအောင် ထုတ်ဖော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ၊ အမျိုးသမီးတွေ အကြီးတန်း ရာထူးတာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်တဲ့အခါ အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်၊ ဝေဖန် ပြစ်တင်ခံရ၊ မတရား အနိုင်ကျင့်ခံရ တာတွေ ကြုံရမယ်ဆိုတာ သိပါလျက်နဲ့ ဒါတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်တာ၊ ဒါတွေကို သတ္တိခွန်အား လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် အိုးအိမ်တွေကို စွန့်ခွာပြီး ဘေးလွတ်ရာမှာ ခိုလုံရှင်သန်ဖို့ စွန့်စွန့်စားစား ဆုံးဖြတ်ရတာကလည်း ရဲစွမ်းသတ္တိပါပဲ။”
ဒီလို အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်တွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာတဝန်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာအောင် အားလုံး တညီတညွတ်တည်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားကြမယ့်အကြောင်း အမေရိကန် သမ္မတ ကတော် Jill Biden ကလည်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“လက်တင်အမေရိကားမှာ တရားမျှတမှုရရေး တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ပညာ သင်ကြားခွင့်ရရေး၊ ဥရောပမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တည်ငြိမ်မှု ရရှိရေး၊ အာဖရိက ဆာဟာရ သဲကန္တာရ နိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ့်မိသားစုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရေး၊ အာရှမှာ ကျား-မ အခြေခံ အကြမ်းဖက်မှုတွေ တိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ…. ဒီလို ရဲရဲဝံဝံ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အားလုံးကို ပြောချင်တာက ကျမတို့ ဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စိတ်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ ဆက်လက် လက်တွဲ ကြိုးပမ်းသွားကြမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အသံတွေ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာတောင် ကိုယ့်ကို နုတ်ပိတ်ဖို့ ကြိုးစားသူတွေကို ဟန့်တားဖို့ အတူ လက်တွဲကြိုးပမ်း သွားကြပါမယ်။”
ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတရေးနဲ့ လူသားတိုင်းရဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးတွေ အားလုံး တန်းတူ ရရှိရေး အတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကြားကပဲ မကြောက်မရွံ့ ရှေ့ဆက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ကမ္ဘာတဝန်းက အမျိုးသမီးတွေကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက အမျိုးသမီး ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်တွေ အဖြစ် ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကစလို့ အလေးထား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝန်းက အမျိုးသမီး ၁၇၀ နီးပါး ဒီဆု ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီးပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်က အမျိုးသမီး ၂၁ ဦးကို ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်တာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မဖြိုးဖြိုးအောင် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ့မတိုင်ခင်တုန်း ကလည်း ဒီဆုကို ၈၈ မျိုးဆက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းလည်းဖြစ်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဇင်မာအောင်၊ အမျိုးသမီးတွေပေါ် အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကနေ ကာကွယ်နိုင်မယ့် ဥပဒေတွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း စစ်ပွဲတွေ ရပ်စဲရေး ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသူ မမေစံပယ်ဖြူနဲ့ ပဋိပက္ခဒေသက အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေအရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူ နော်ကညောဖောတို့လည်း ရခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ် အမျိုးသမီးကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားခွင့် ပြုပါရှင်။ ကျမ ခင်ဖြူထွေးပါရှင်။
၂၀၂၂ ခုနှဈ နိုငျငံတကာ အမြိုးသမီး ရဲစှမျးသတ်တိရှငျဆု (အမြိုးသမီးကဏ်ဍ)
အကငျြ့ပကျြခွစားမှု၊ တရား မမြှတမှု၊ ကြား-မ အခွခေံ ခှဲခွားဆကျဆံမှုတှနေဲ့ အကွမျးဖကျမှုတှကေို တိုကျဖကျြပွီး ပိုမို ပှငျ့လငျး ငွိမျးခမျြးသာယာတဲ့ လူ့ဘောငျ အသိုငျးအဝိုငျးတှေ ဖွဈပျေါလာရေး ကွိုးပမျးနကွေတဲ့ မွနျမာ အပါအဝငျ ကမ်ဘာတဝနျးက အမြိုးသမီး ၁၂ ဦးကို အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဌာနက ဒီနှဈအတှကျ အမြိုးသမီး ရဲစှမျးသတ်တိရှငျတှအေဖွဈ ဂုဏျပွု လိုကျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံကတော့ လူငယျအမြိုးသမီး တကျကွှလှုပျရှားသူတဦးဖွဈတဲ့၊ ကွားကာလ အမြိုးသားညီညှတျရေး အစိုးရ NUG ဒုဝနျကွီး မအိသဉ်ဇာမောငျ ခြီးမွှငျ့ခံရတာပါ။ ဒီနှဈအတှကျ အမြိုးသမီး ရဲစှမျးသတ်တိရှငျဆု ဂုဏျပွုပှဲအကွောငျးကို ဒီသီတငျးပတျ အမြိုးသမီးကဏ်ဍမှာ မခငျဖွူထှေးက စုစညျး တငျဆကျထားပါတယျ။
နှဈစဉျနှဈတိုငျး မတျလ ၈ ရကျ နိုငျငံတကာ အမြိုးသမီးမြားနေ့ ကရြောကျပွီး ရကျပိုငျးအတှငျးမှာ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဌာန ကမ်ဘာတဝနျး တရားမြှတရေး၊ ငွိမျးခမျြးရေးနဲ့ အခွခေံ လူ့အခှငျ့အရေးတှေ အတှကျ ရှတေ့နျးကနေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုကျပှဲဝငျနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို ရဲစှမျးသတ်တိရှငျတှအေဖွဈ ဂုဏျပွုလရှေိ့တာ ဖွဈပွီး ဒီနှဈကတော့ ၁၆ ကွိမျမွောကျ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈ ဆုခြီးမွှငျ့တဲ့ အခမျးအနားကို မတျလ ၁၄ ရကျ၊ ဒီသီတငျးပတျ တနင်ျလာနကေ့ ဝါရှငျတနျဒီစီ မွို့တျောမှာ ကငျြးပခဲ့တာ ဖွဈပွီး နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Antony Blinken ၊ သမ်မတ ကတျော Jill Biden တို့နဲ့အတူ အထငျကရ အမြိုးသမီးခေါငျးဆောငျတခြို့ လူကိုယျတိုငျ တကျရောကျကွပါတယျ။ လကျရှိ အကဉျြးခခြံနရေတဲ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ သတငျးထောကျ ဆုရှငျတဦး ကလှဲလို့ ကနျြတဲ့ဆုရှငျ အားလုံး ကတော့ အှနျလိုငျးကတဆငျ့ တကျရောကျခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီအခမျးအနားဟာ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ရဲစှမျးပွောငျမွောကျတဲ့ လုပျရပျတှကေို ဂုဏျပွု ခြီးမွှငျ့တာ ဖွဈသလို၊ တခြိနျတညျးမှာလညျး ကမ်ဘာတဝနျးက အမြိုးသမီးတှေ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ ထိတျလနျ့ တုနျလှုပျဖှယျရာ အခွအေနတှေကေို သတိပေးရာလညျး ရောကျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ လကျရှိမှာ ရုရှားရဲ့ ကြူးကြျောတိုကျခိုကျမှုတှေ ကွုံနရေတဲ့ ယူကရိနျးနိုငျငံမှာ အမြိုးသမီးတှေ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခွအေနတှေကေို အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Antony Blinken က အလေးထား ထညျ့သှငျး ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
“ယူကရိနျး အမြိုးသမီးတှေ သနျးနဲ့ခြီ မိသားစုလိုကျ တိုငျးပွညျကနေ ထှကျပွေး နကွေရသလို၊ ရုရှားရဲ့ တရားမြှတမှု ကငျးမဲ့တဲ့ စဈပှဲကို ခုခံ တိုကျခိုကျနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးတှလေညျး ပွညျတှငျးမှာ နောကျထပျ သနျးနဲ့ခြီ ရှိနပေါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၁ ပတျလောကျကပဲ ဒီလိုလူတှေ အမြားအပွားကို ပိုလနျနိုငျငံ နယျစပျမှာ ကနြျော တှခေဲ့ရပါတယျ။ ရုရှားရဲ့ ရနျလို တိုကျခိုကျမှုတှကေနေ လှတျမွောကျဖို့ အမြိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယျတှေ နယျစပျဖွတျကြျော ထှကျပွေးနရေတဲ့ ပုံရိပျတှကေ အလှယျတကူ မပြေ့ောကျပဈဖို့ မလှယျပါဘူး။”
အလားတူ သမ်မတ ကတျော Jill Biden ကလညျး ယူကရိနျး အမြိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယျတှေ အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈရတဲ့ အကွောငျး ပွောဆိုခဲ့သလို၊ ပဋိပက်ခတှေ၊ ဖိနှိပျမှုတှနေဲ့ အကပျြအတညျးတှကွေား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရုနျးကနျ ရှဆေ့ကျနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို ခြီးကြူး ဂုဏျပွု ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ကမ်ဘာကွီး တိုးတကျ ကောငျးမှနျလာဖို့အတှကျ နစေ့ဉျ နတေို့ငျး အမြိုးသမီးတှဟော သငျကွား ပွသ၊ ထိနျးကွောငျး မွတေောငျ မွှောကျပေး တာတှနေဲ့အတူ အိပျမကျတှေ အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျအောငျ၊ ဦးဆောငျမှုတှေ ပေးနိုငျအောငျ ကွိုးပမျးနကွေသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှဟော မတရားမှုကို နုတျဆိတျ မနကွေပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အကွမျးဖကျမှုတှေ၊ အမုနျးတရားတှေ၊ ခှဲခွားဆကျဆံမှုနဲ့ ဖယျကွဉျခံရမှုတှကေ အမြိုးသမီးတှကေို နုတျဆိတျအောငျ လုပျနတောတှေ ရှိပါတယျ။”
ဒီလို နုတျဆိတျအောငျ လုပျတာတှရှေိပမေဲ့လို့ အမြိုးသမီးတှဟော အကွောကျတရားတှကေို ဘေးဖယျပွီး ပိုမို ငွိမျးခမျြးပွီး ပှငျ့လငျးတဲ့ လူဘောငျ အသိုငျးအဝိုငျးတှေ ပျေါပေါကျလာရေး ကွိုးပမျးနကွေတယျလို့ အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Antony Blinken က ဒီဂုဏျပွု ခြီးမွှငျ့ပှဲ အခမျးအနားမှာ ပွောပါတယျ။
“ဒီနှဈ အမြိုးသမီး ရဲစှမျးသတ်တိရှငျဆု ရှငျတှကေတော့ ကမ်ဘာကွီး ပိုမို ငွိမျးခမျြးလာဖို့၊ ကမ်ဘာ့တိုကျကွီး ၄ ခုမှာ တရားမြှတမှု ရှိရေး ကွိုးပမျးနသေူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ အစီအစဉျတကြ ကြူးလှနျနတေဲ့ ရာဇဝတျမှုတှေ ကနေ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျပကျြစီးမှုတှကေနေ ကာကှယျရေး အခကျအခဲ စိနျချေါမှုတှကေို ရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးနကွေသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသမီးငယျတှေ၊ လိငျစိတျကှဲပွားကွတဲ့ LGBTQI တှေ နဲ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးတှငျး ဖယျကွဉျခံရသူတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ပိုမို တိုးတကျကောငျးမှနျလာအောငျ ရှဆေ့ောငျ ကွိုးပမျးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။”
ဒီနှဈ နိုငျငံတကာ ရဲစှမျးသတ်တိရှငျဆု ခြီးမွှငျ့ခံရတဲ့ အမြိုးသမီး ၁၂ ဦးမှာ ၅ ဦးက မွနျမာအပါအဝငျ အာရှတိုကျနိုငျငံတှကေ ဖွဈပွီး၊ အာဖရိကတိုကျ နိုငျငံတှကေ ၃ ဦး၊ တောငျအမရေိကားက ၂ ဦးနဲ့ ဥရောပတိုကျက ၂ ဦး ဖွဈပါတယျ။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံက သဘာဝပတျဝနျးကငျြရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ ရှနေ့ေ Rizwana Hasan ၊ အီရတျနိုငျငံမှာ အကငျြ့ပကျြ ခွစားမှုတှေ ဦးဆောငျ တိုကျဖကျြရာမှာ ထငျရှားတဲ့ လကျရှိ ဒုတိယ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး Taif Sami Mohammed ၊ ဗီယကျနမျနိုငျငံမှာ လကျရှိ ဖမျးဆီး ထောငျခခြံထားရတဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ သတငျးထောကျ Phạm Đoan Trang ၊ နီပေါနိုငျငံက လိငျစိတျခံယူမှု ကှဲပွားသူ လူနညျးစုတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးနဲ့ လူမှု တရားမြှတမှုတှအေတှကျ တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ Bhumika Shrestha ၊ တောငျအာဖရိကနိုငျငံမှာ ကြားမ ကှဲပွားမှုကွောငျ့ အကွမျးဖကျ သတျဖွတျခံရမှုတှနေဲ့ အစီအစဉျတကြ ကြူးလှနျနတေဲ့ ရာဇဝတျမှုတှကေို တိုကျဖကျြရေး ကွိုးပမျးနသေူ Roegchanda Pascoe ၊ လိုငျဘေးရီးယား နိုငျငံက အမြိုးသမီး အခှငျ့အရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ Facia Boyenoh Harris ၊ လဈဗြားနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံး အမြိုးသမီး နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Najla Mangoush ၊ မိုဒိုဗာနိုငျငံမှာ လှတျတျောတှငျး အမြိုးသမီးတှေ အခြိုးကြ ကိုယျစားပွုခှငျ့ရရေး ဦးဆောငျ ကွိုးပမျးခဲ့သူ လှတျတျောအမတျ Doina Gherman ၊ ရိုမေးနီးယား အမြိုးသမီး အခှငျ့အရေး လှုပျရှားသူ Carmen Gheorghe ၊ ဘရာဇီးနိုငျငံမှာ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ တကျကွှလှုပျရှားသူတှေ အကွမျးဖကျ တိုကျခိုကျခံရတဲ့ ဖွဈရပျတှေ အပါအဝငျ အကငျြ့ပကျြခွစားမှုတှနေဲ့ မူးယဈဆေးဝါး တိုကျဖကျြရေး ကိစ်စရပျတှေ ကိုငျတှယျရာမှာ ထငျရှားတဲ့ ရှနေ့ေ Simone Sibilio do Nascimento ၊ ကိုလံဘီယာ နိုငျငံက လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ သဘာဝ ပတျဝနျးကငျြရေးရာ တကျကွှလှုပျရှားသူ Josefina Klinger Zúñiga တို့နဲ့ အတူ မွနျမာနိုငျငံကတော့ လူငယျ အမြိုးသမီး တကျကွှလှုပျရှားသူ တဦးဖွဈတဲ့ လကျရှိမှာ ကွားကာလ အမြိုးသားညီညှတျရေး အစိုးရ NUG ရဲ့ အမြိုးသမီး၊ လူငယျနဲ့ ကလေးသူငယျရေးရာ ဒုဝနျကွီး မအိသဉ်ဇာမောငျ တို့ ဖွဈပါတယျ။
“အမြိုးသမီးတှဟော ဒီကနေ့ အခွအေနအေထိ ဒီမိုကရစေီနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး ရပိုငျခှငျ့တှအေတှကျ တောငျးဆို ဆန်ဒပွပှဲတှမှော တကျတကျကွှကွှ ပါဝငျလှုပျရှားနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ ကမြ ရခဲ့တဲ့ဆုဟာ မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှနေဲ့ လူငယျတှအေပျေါ စဈတပျက ကြူးလှနျတဲ့ အကွမျးဖကျ ရာဇဝတျမှုတှေ၊ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှကေို အဆုံးသတျစဖေို့နဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဒီမိုကရစေီ ရရှိရေး၊ လူ့အခှငျ့အရေး ရရှိရေး ကွိုးစားရုနျးကနျမှုတှေ အတှကျ အသိအမှတျ ပွုပေးတဲ့ဆုလို့ ကမြ အနနေဲ့ ခံယူပါတယျ။”
ဒီမိုကရစေီရေးနဲ့ လူနညျစုတှရေဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ အတှကျ ရှတေ့နျးက တိုကျပှဲဝငျသူတဦး အဖွဈ ထငျရှားတဲ့ မအိသဉ်ဇာမောငျဟာ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပညာရေး ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုနဲ့ ကြောငျးသားသမဂ်ဂ လှုပျရှားမှုတှမှော ပါဝငျခဲ့တဲ့ လူငယျ အမြိုးသမီးတဦး ဖွဈပွီး ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ကြောငျးသားသပိတျ လမျးလေြှာကျ ခြီတကျပှဲမှာ ပါဝငျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ ဖမျးဆီး အကဉျြးခြ ခံခဲ့ရသူ ဖွဈပါတယျ။ စဈ အာဏာသိမျးမှု နောကျပိုငျးမှာလညျး ငွိမျးခမျြးတဲ့ ဒီမိုကရစေီရေး တောငျးဆို ဆန်ဒပွပှဲတှမှော ပါဝငျခဲ့တဲ့အတှကျ မွနျမာစဈကောငျစီက ဖမျးဝရမျး ထုတျခံထားရသူ ဖွဈပွီး လကျရှိမှာ ထှကျပွေး တိမျးရှောငျနရေပမေဲ့လို့ ဒီမိုကရစေီနဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး အတှကျ မဆုတျမနဈ ရှဆေ့ကျ တိုကျပှဲဝငျနတောကွောငျ့ ခုလို နိုငျငံတကာ အမြိုးသမီး ရဲစှမျးသတ်တိရှငျဆု ဂုဏျပွု ခြီးမွှငျတာ ဖွဈတဲ့အကွောငျး အမရေိကနျ နိုငျငံခွားရေးဌာနက ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဆုရှငျ ၁၂ ဦးရဲ့ကိုယျစား လဈဗြား နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီး Najla Mangoush က မိနျ့ခှနျး ပွောကွားခဲ့ပွီး အခကျအခဲ အကပျြအတညျးတှေ ဘယျလိုရှိရှိ၊ ကိုယျယုံကွညျရာ လုပျသငျ့လုပျထိုကျတာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပျဖို့ ဆုံးဖွတျ လုပျဆောငျရဲတာဟာ ရဲရငျ့မှု သတ်တိခှနျအားပါလို့ သူက ပွောသှားပါတယျ။
“ကိုယျလကျခံ ယုံကွညျတဲ့အတိုငျး ထုတျဖျောပွောဆိုဖို့ ခကျခဲလှနျးတဲ့ အခြိနျမှာတောငျ ဒါကို ရအောငျ ထုတျဖျောဖို့ ဆုံးဖွတျတာ၊ အမြိုးသမီးတှေ အကွီးတနျး ရာထူးတာဝနျတှေ ထမျးဆောငျတဲ့အခါ အခြိနျပွညျ့ စောငျ့ကွညျ့၊ ဝဖေနျ ပွဈတငျခံရ၊ မတရား အနိုငျကငျြ့ခံရ တာတှေ ကွုံရမယျဆိုတာ သိပါလကျြနဲ့ ဒါတှကေို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရငျဆိုငျတာ၊ ဒါတှကေို သတ်တိခှနျအား လို့ ဆိုလိုပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှေ အနနေဲ့ ကိုယျ့တိုငျးပွညျ အိုးအိမျတှကေို စှနျ့ခှာပွီး ဘေးလှတျရာမှာ ခိုလုံရှငျသနျဖို့ စှနျ့စှနျ့စားစား ဆုံးဖွတျရတာကလညျး ရဲစှမျးသတ်တိပါပဲ။”
ဒီလို အမြိုးသမီး ရဲစှမျးသတ်တိရှငျတှနေဲ့အတူ ကမ်ဘာတဝနျး အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဘဝတှေ တိုးတကျ ကောငျးမှနျလာအောငျ အားလုံး တညီတညှတျတညျး လကျတှဲ ဆောငျရှကျသှားကွမယျ့အကွောငျး အမရေိကနျ သမ်မတ ကတျော Jill Biden ကလညျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“လကျတငျအမရေိကားမှာ တရားမြှတမှုရရေး တိုကျပှဲဝငျနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ ရှအေ့လယျပိုငျးမှာ ပညာ သငျကွားခှငျ့ရရေး၊ ဥရောပမှာ ဒီမိုကရစေီနဲ့ တညျငွိမျမှု ရရှိရေး၊ အာဖရိက ဆာဟာရ သဲကန်တာရ နိုငျငံတှမှော ကိုယျ့မိသားစုကို ကာကှယျပေးနိုငျရေး၊ အာရှမှာ ကြား-မ အခွခေံ အကွမျးဖကျမှုတှေ တိုကျဖကျြရေး ကွိုးပမျးနကွေတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ…. ဒီလို ရဲရဲဝံဝံ တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အားလုံးကို ပွောခငျြတာက ကမြတို့ ဟာ ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျရေးအတှကျ စိတျခှနျအားအပွညျ့နဲ့ ဆကျလကျ လကျတှဲ ကွိုးပမျးသှားကွမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အသံတှေ ထုတျဖျောပွောဆိုဖို့ ခကျခဲတဲ့ အခြိနျမှာတောငျ ကိုယျ့ကို နုတျပိတျဖို့ ကွိုးစားသူတှကေို ဟနျ့တားဖို့ အတူ လကျတှဲကွိုးပမျး သှားကွပါမယျ။”
ငွိမျးခမျြးရေး၊ တရားမြှတရေးနဲ့ လူသားတိုငျးရဲ့ အခွခေံ အခှငျ့အရေးတှေ အားလုံး တနျးတူ ရရှိရေး အတှကျ ခွိမျးခွောကျမှုတှေ၊ အကွမျးဖကျမှုတှေ ကွားကပဲ မကွောကျမရှံ့ ရှဆေ့ကျ တိုကျပှဲဝငျနကွေတဲ့ ကမ်ဘာတဝနျးက အမြိုးသမီးတှကေို အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဌာနက အမြိုးသမီး ရဲစှမျးသတ်တိရှငျတှေ အဖွဈ ၂၀၀၇ ခုနှဈကစလို့ အလေးထား ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့လာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ မွနျမာအပါအဝငျ ကမ်ဘာတဝနျးက အမြိုးသမီး ၁၇၀ နီးပါး ဒီဆု ခြီးမွှငျ့ခံခဲ့ရပွီးပါပွီ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈက အမြိုးသမီး ၂၁ ဦးကို ဂုဏျပွု ခြီးမွှငျ့တာမှာ မွနျမာနိုငျငံက လူ့အခှငျ့အရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ မဖွိုးဖွိုးအောငျ ခြီးမွှငျ့ခံခဲ့ရပါတယျ။ ဒီ့မတိုငျခငျတုနျး ကလညျး ဒီဆုကို ၈၈ မြိုးဆကျ နိုငျငံရေးအကဉျြးသူဟောငျးလညျးဖွဈ၊ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ NUG နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးလညျးဖွဈတဲ့ ဒျေါဇငျမာအောငျ၊ အမြိုးသမီးတှပေျေါ အကွမျးဖကျမှုမြိုးစုံကနေ ကာကှယျနိုငျမယျ့ ဥပဒတှေေ ပျေါပေါကျလာဖို့နဲ့ ကခငျြပွညျနယျတှငျး စဈပှဲတှေ ရပျစဲရေး ကွိုးပမျးခဲ့တဲ့ ကခငျြတိုငျးရငျးသူ မမစေံပယျဖွူနဲ့ ပဋိပက်ခဒသေက အမြိုးသမီးနဲ့ ကလေးငယျတှအေရေး ဆောငျရှကျနတေဲ့ ကရငျတိုငျးရငျးသူ နျောကညောဖောတို့လညျး ရခဲ့ဖူးတယျဆိုတာ တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျ အမြိုးသမီးကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားခှငျ့ ပွုပါရှငျ။ ကမြ ခငျဖွူထှေးပါရှငျ။